महासचिव विप्लवदेखि समर्थक जनतासम्मलाई टार्गेट गर्दै गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई पठाए यस्तो सर्कुलर ! — Imandarmedia.com
महासचिव विप्लवदेखि समर्थक जनतासम्मलाई टार्गेट गर्दै गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई पठाए यस्तो सर्कुलर !
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछिल्लो अवस्थाबारे गृहमन्त्रालयले जानकारी माग गरेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्मको विवरण तीन दिनभित्र पठाउन प्रहरीलाई गृहले गोप्य सर्कुलर गरेको छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गर्न समेत नदिएको सरकारले नेकपाका उच्च तहका नेतादेखि स्थानीय कार्यकर्ता र समर्थकको संख्या समेत पठाउन सर्कुलरमा भनिएको छ ।
संचार केन्द्रलाई प्राप्त गोप्य सर्कुलर ११ बुँदे छ, जसमा नेकपाको पछिल्लो अवस्थामा तीन दिनभित्र अनिवार्य रुपमा पठाउन भनिएको छ । सर्कुलरका ११ बुँदा कम्युनिस्ट त्यसमा पनि माओवादी पार्टीको सांगठानिक संरचनाबारे राम्रो जानकार भएको व्यक्तिले तयार गरेको देखिन्छ । केन्द्रीय नेता, जबस तथा मोर्चादेखि सैन्य संरचनादेखि जनअदालतबारे पनि विवरण पठाउन भनिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको सबै सांगठानिक संरचनाबारे जानकारी पठाउन भनिएको छ । जिल्ला जनपरिषद्, जनप्रतिनिधि सभा, जनअदालतको अवस्थाबारे पनि विवरण बुझाउन भनिएको छ ।
प्रहरी सर्कुलरको चार नम्बर बुँदामा युवा संगठनबारे जानकारी मागिएको छ । त्यसैगरी पाँच नम्बरमा सैन्य संरचना र फर्मेशनको अवस्थाबारे जानकारी माग गरिएको छ । सात नम्बर बुँदमा सेल्टर र तालिमको लागि प्रयोग गरेका र प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँहरुबारे पत्ता लगाउन भनिएको छ ।
सर्कुलरको सुरुमा यस्तो भनिएको छ, ‘नेकपा (विप्लव) द्वारा गठित देहयका संगठन र मोर्चाको पछिल्लो अद्यावधिक विस्तृत विवरण तीनदिनभित्र अनिवार्य रुपमा पठाउन हुन अनुरोध छ’ भनिएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री भइसकेपछि दोस्रो पटक नेकपाको अवस्थाबारे माग गरिसकेका छन् । पहिलो चरणमा मागिएको विवरणमा फेरि थप गरेर पुनः ७७ जिल्ला प्रहरीलाई सर्कुलर गरेको हो ।
अहिलेसम्म सरकारले नेकपाबारे औपचारिक धारणा बनाइ सकेको छैन । उसको देशभरको विवरणका आधारमा औपचारिक धारणा बनाउन पछिल्लो सर्कुलर गरिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रहरीभित्रको जनयुद्धकालिन संरचनालाई ब्यूताएका थिए । त्यसैमार्फत नेकपाका गतिविधिको सूचना लिइरहेका थिए ।
यसअघि नेकपाका महासचिव विप्लव र स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाको घरमा पक्राउ पुर्जी टाँसेको थियो ।
विराटनगरमा युवा संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलनमा हस्तक्षेप गरेर प्रहरीले नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली र पोलिट्ब्यूरो सदस्य मदम राईसहित २ सय भन्दा बढी नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेको थियो । अदलातको आदेशमा सबै नेताहरु छुटेका छन् ।